DEG-DEG: Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Zinedine Zidane Uu Shir Jaraa’id Oo Aan Cadayn Ahayn Qabanayo-Miyuu Shaqada Madrid Iska Casilay? – GOOL24.NET
DEG-DEG: Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Zinedine Zidane Uu Shir Jaraa’id Oo Aan Cadayn Ahayn Qabanayo-Miyuu Shaqada Madrid Iska Casilay?
Kooxda Real Madrid ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay in macalinka kooxdeeda kowaad ee Zinedine Zidane uu qabanayo shir jaraa’id kaas oo la filayo in uu faah faahin kaga bixin doono mustaqbalkiisa Santiago Bernabeu. Intii uu xili ciyaareedkani socday saxaafada Spain ayaa si wayn uga hadlaysay mustaqbalka macalinka ree France iyada oo waliba shardi lagu xidhay in uu kooxda sii joogi doono kaas oo ahaa in uu koobka Champions League kula guulaysto Madrid.
Kadib markii uu Zidane ka soo caawiyay kooxdiisa in ay koobkii saddexaad oo xidhiidh ah ugu soo guulaysatay magaalada Kiev waxay hadda Real Madrid war saxaafadeed ay soo saartay ku shaacisay waqtiga uu Zidane ka soo hormuuqanayo saxaafada.
Idaaca dalka Spain ee Cadena SER ayaa hadda cadaysay in Zinedine Zidane uu iska casilay shaqada tababaranimo ee Real Madrid. Warar badan oo hadda si xawli ah u soo baxaya ayaa sheegaya in Zinedine Zidane uu si rasmi ah ugu dhawaaqayo in uu iska casilay doorkii tababaranimo ee Los Blancos.
Zinedine Zidane ayaa maanta marka ay saacadu tahay 1:00pm CEST saxaafada kaga soo horumuuqanaya qolka saxaafada ee Real Madrid City isaga oo si wayn loo sugayo waxyaabaha uu shirkan jaraa’id ee aan caadiga ahayn kaga hadli doono.
Waxayna Real Madrid warka ay arintan ka soo saartay ay saxaafada ku wargalisay in ay ka soo qayb galaan shirka jaraa’id ee Zinedine Zidane iyada oo loo sheegay in marka ay saacadu gaadho 12:00pm CEST uu xidhmayo soo galitaanka shirka jaraa’id.
Idaacada Cadena SER ayaa haddaba sii shaacisay in Zinedine Zidane uu iska casilay shaqadii tababaranimo ee Real Madrid isla markaana uu afkiisa ku shaacin doono go’aankan iyada oo Madrid u dhaaftay isaga in uu faah faahin ka bixiyo go’aankiisa.
Haddaba akhriste waqti dhowo filo warkan oo rasmi ah iyo faah faahinta uu Zidane ka bixin doono mustaqbalkiisa iyo haddii ay wax iska badali doonaan.